Ahoana no hitsambikina manomboka fiara - Victor Mochere
Ny karazana fahapotehana mahazatra indrindra dia ny bateria fisaka – ary isaky ny mitranga izany dia tsy mety foana izany. Ny bateria maty ao amin'ny fiaranao dia mety midika ny fahasamihafana misy eo amin'ny fiverenana soa aman-tsara any an-trano sy ny mijanona any an-toeran-kafa mandritra ny ora maro. Matetika mitranga amin'ny andro mangatsiaka ny bateria fisaka rehefa iharan'ny fanerena hanao izany. Raha tsy mampiasa matetika ny fiaranao ianao dia matetika ny batterie fiara no very charge rehefa mandeha ny fotoana. Raha toa ka very foana ny fiampangana azy amin'ny toe-javatra mahazatra, dia mety hisy olana bebe kokoa. Mba hiverenanao eny an-dalana dia azonao atao ny mitsambikina manomboka ny fiaranao.
Ahoana no hitsambikina manomboka fiara miaraka amin'ny jump lead
Ahoana ny fomba hitsambikina manomboka fiara miaraka amin'ny fonosana batterie portable
Ny fomba mahazatra sy mahomby indrindra amin'ny fitsambikinana fiara dia ny fampiasana jump lead. Ny hany ilainao dia; fiara faharoa misy batterie feno (fadio ny fampiasana fiara hybrid na herinaratra fa mety hiteraka fahasimbana izany), ary fitarihana mitsambikina tsara.
Fiarovana amin'ny fiarovana alohan'ny hitsambikinana amin'ny fiantsonana fiara
Rehefa mitsambikina ny fiara dia zava-dehibe ny tsy mandray risika. Jereo aloha ny bokin'ny tompony ary raha tsy matoky ianao fa fantatrao izay ataonao dia mitadiava fanampiana.
Jereo raha misy fahasimbana - raha misy fahasimbana miharihary amin'ny iray amin'ireo bateria, na ny fitarihana hitsambikina, aza atahorana hanandrana hitsambikina
Esory ny peratra na firavaka vy anaovanao ary ataovy izay hahazoana antoka fa tsy misy metaly mikitika ny faran'ny batterie
Dingana hitsambikina manomboka fiara
Ireto ny dingana hitsambikina manomboka fiara miaraka amin'ny fitarihana mitsambikina.
Alohan'ny hanombohana dia ataovy azo antoka fa maty ny rafitra elektrika na fitaovana rehetra ao amin'ny fiara misy ny bateria maty (jiro, radio/CD, sat-nav, sns.) ary ampidino ny varavarankelin'ny mpamily raha azo atao.
Apetraho eo akaikin'ilay fiara naratra araka izay azo atao ny fiara faharoa, tsy misy fikasihan'ireo fiara, hiantohana fa ny fitarihana mitsambikina dia tonga tsara amin'ny bateria iray mankany amin'ny iray hafa.
Ataovy azo antoka fa maty ny motera roa, esory ny fanalahidin'ny fantson-jiro ary sokafy ny satrony (na asio boot raha eo ny bateria)
Ampifandraiso amin'ny fiatoana tsara amin'ny bateria fisaka ny tendrony iray amin'ny fitarihana mitsambikina mena. Ny terminal tsara dia matetika misy rakotra plastika mena misy marika miampy (+) eo aminy. Atsofohy miverina ny fonony mba hidirana amin'ny terminal
Avy eo, apetaho amin'ny faran'ny fiantsonana mitsambikina mena amin'ny faran'ny batterie tsara amin'ny fiara faharoa ny tendrony hafa
Ampifandraiso amin'ny faran'ny batterie tsara ny tendrony iray amin'ny fitarihana mitsambikina mainty
Avy eo, apetaho amin'ny teboka tsara amin'ny fiara ny fiantsonan'ny fitsambikina mainty ny tendrony hafa - ny ampahany metaly matanjaka amin'ny motera no tsara indrindra.
Andramo izao ny manomboka ny fiara naratra. Raha tsy manomboka aorian'ny fanandramana vitsivitsy dia mety ho matotra kokoa noho ny bateria fisaka
Raha manomboka izany dia avelao handeha mandritra ny dimy minitra eo ho eo
Atsaharo ny fiara naratra, tapaho ny tariby mitsambikina ratsy ary jereo fa mandeha indray ny motera. Tapaho ny tariby mitsambikina sisa
Ahoana no hanesorana soa aman-tsara ny jump lead
Mba hanesorana soa aman-tsara ny fitarihana mitsambikina dia ataovy izao manaraka izao.
Vonoy ny motera amin'ny fiara roa
Tapaho ny tariby mitsambikina mainty mifandray amin'ilay fiara maty
Atsaharo ny tendrony hafa amin'ny fitarihana mitsambikina mainty amin'ny fiara faharoa
Tapaho ny tariby mitsambikina mena mifandray amin'ny fiara faharoa
Atsaharo ny faran'ny tariby mitsambikina mena amin'ny bateria amin'ny fiara maty
Rehefa avy nesorina ny firaka
Avereno indray ny motera amin'ny fiara maty. Mila mamelona tanteraka ny batterie mba ho azo ampiasaina tanteraka, izay tsara indrindra amin'ny fampiasana famandrihana bateria kalitao mandritra ny ora maromaro. Mandra-pahatongan'izany, raha azo atao, mandehana ara-dalàna ny fiara (tsy amin'ny fifamoivoizana be) mandritra ny 30 minitra eo ho eo mba hanandrana hamerina ny bateria.
Raha manahy ny ho tafahitsoka amin'ny batterie fisaka ianao rehefa tsy afaka miantso vonjy na mitady fanampiana amin'olona, ​​dia azonao atao ny mividy fonosana batterie azo entina ho fitandremana, mba hitazomana anao amin'ny finday raha toa ka mihitsoka ny batterieo.
Mitsambikina manomboka amin'ny fonosana bateria azo entina
Ireto ny dingana hitsambikina manomboka fiara miaraka amin'ny fonosana bateria azo entina.
Hamarino aloha fa feno ny fonosana batterie
Tadiavo ny batteran'ny fiara - matetika ao amin'ny helotry ny motera eo ambanin'ny bonnet, fa amin'ny fiara sasany dia ao anaty boot. Azo inoana fa hafenina ao ambanin'ny fonony plastika izy io - esory ity ary ho hitanao ny batterie miaraka amin'ny terminal roa
Ampifandraiso amin'ny terminal tsara (+) amin'ny batterie ny fitarihana tsara (mena) avy amin'ny fonosana batterie. Ampifandraiso amin'ny teboka misy tany tsara amin'ny fiara maty ny fitarihana ratsy (mainty) - ny ampahany metaly matanjaka amin'ny motera no tsara indrindra.
Apetraho eo amin'ny tany eo akaikin'ny fiara ny kitapo batterie, ny firaka dia mazàna lava lava ka mahatratra ny bateria. Fadio ny mametraka azy eo amin'ny motera fa mety hianjera rehefa manomboka ny motera
Raha vao mifandray ny fonosana batterie dia velomy ny fonosana ary andramo ny manomboka ny fiara toy ny mahazatra. Raha tsy manomboka aorian'ny fanandramana vitsivitsy dia mety ho matotra kokoa noho ny bateria fisaka
Raha manomboka ny fiara dia tazony 5 minitra eo ho eo ny maotera. Atsaharo ny motera, avy eo vonoy ny fonosan'ny batterie ary esory ny firaka eo amin'ny fonosana. Avereno indray izao ny motera
Ny batterie an'ny fiara dia mila mamelona tanteraka mba ho azo ampiasaina tanteraka, izay tsara indrindra amin'ny fampiasana ny batterie tsara kalitao mandritra ny ora maromaro. Mandra-pahatongan'izany, raha azo atao, mandehana ara-dalàna ny fiara (fa tsy ny fifamoivoizana be) mandritra ny 30 minitra eo ho eo mba hanandrana hamerina ny bateria.
Firenena voasazy indrindra eran-tany 2022